501 Kuteedzera Mapfupi naAmy Harrison | Martech Zone
501 Kuteedzera Mapfupi naAmy Harrison
Svondo, Kukadzi 17, 2013 Muvhuro, June 8, 2015 Douglas Karr
Amy Harrison, munyori wemakopi wevanamuzvinabhizimusi nevarairidzi, akaiswa pamablog ekunyora akanakisa pamambure. Amy aburitsa ebook yemadhora gumi nemanomwe ayo mareferenzi emamwe mazwi ake aanofarira uye mazwi pamwe nemamwe mazwi nemitsara yaakaona yakawanda yekublogi uye yekunyora zvinyorwa hofori vachishandisa.
Iyo Copywriting Shortcut Gwaro Inosanganisira:
Nzira makumi matatu kumusoro wemhondi - Pano iwe unowana makumi matatu matemplate (uye mazano emazwi api aunofanirwa kushandisa kuzadza izvo zvisipo) kuitira kuti iwe ugone kuuya nemusoro wenyaya webhizinesi rako kana blog inotaurira vatengi vako zvaunoita (uye nei vachifanira kuramba vachiverenga ) mumasekondi.
104 Mitsara yekuzvichengeta zvichikurukura - Iwe unoziva mashandisiro anoita vamwe vanyori kuchengeta iyo toni yekukurukurirana isinganzwisisike saka unonzwa kunge urikubatana nemunhu chaiye pane kuverenga rairo kuDVD player yako? Zvakanaka heino mazwi ekutaurirana nemitsara yekukubatsira iwe kuita zvakafanana.
54 Nzira dzekucheka kubhururuka - Kana taneta tinotanga kutaura nezve "zvinhu" uye "zvinhu" uye ese "hausi kunyatsondiudza chero chinhu chakanangana" mazwi anogona kuita kuti kunyora kwako kukanganike senzvimbo yawakasiya makiyi emota yako ... Chikamu ichi inokuratidza maitiro ekudzivirira izvi.
75 mitsara yeakawedzerwa POW! - Kuedza kuchengeta iyo peppy simba mushure mekunyorwa kwako kwechitatu kunonyengera, uye zviri nyore kutsvedza mumutauro "wakanaka, mukuru chaizvo, mukuru" unonakidza sezviri mukati meadhirowa yesaladhi mufiriji yangu. Shandisa aya mazwi kana iwe uchida kurira kunge iwe une yese inonakidza simba rembwanana. (Yambiro - Aya ndiwo mazwi ANOGONESA, iwe unongoda kumwayiwa mwenje kuti uwane kopi yako kana blog blog kuhupenyu!)
87 Nzira dzekupenda marwadzo emutengi wako - Kunyanya kutsanangura iwe kwaungave nezve matambudziko kana nyaya dzinotarisana nemutengi wako, ndipo pavanozogamuchira zvikuru kune izvo zvaunoti iwe unogona kuita nezvazvo. Varatidze zvakajeka kuti iwe unonzwisisa chaizvo zvavari kusangana nazvo.
80 mitsara yekuvaratidza manzwiro avachaita - Mushure mekupenda pikicha yemarwadzo avo iwe unofanirwa kuzokwanisa kutsanangura kushamisika kwavanozonzwa mushure mekunge vasaina kublog rako, vatenga chigadzirwa chako kana kukuhaya handiti? Nyura muchikamu chino kana iwe uchida kutsanangura zvese zvinoshamisa mhedzisiro yavanogona kutarisira kubva mukushanda newe.
71 Nzira dzekuvhara chibvumirano - Hazvina basa kana iwe uchingoda kuti vateereri vako varambe vachiverenga, kana kusaina kune yako tsamba, kana kujoina yako nhengo yekirabhu kana kutenga yako eBook iwe unofanirwa kuvarega vazive zvekuita uye nei vachifanira kuita it. Aya mitsara anokuratidza kuti pane inopfuura 1 nzira yekuita kuti mutengi wako atore matanho.
Mashoko emunhu ” - chakasanganisirwa chikamu icho chaunogona kunyora chako pachako zvirevo, kana zvimwe zvirevo zvinogona kuve zvakanangana nekwako musika, dunhu uye chero imwe diki quirky "iwe-isms." Iwe unogona kushamisika kuti izvi zvinonyangarika nyore nyore sei kubva pane zvawanyora kunze kwekunge iwe uchiziva nezvekusanganisira ivo.
Shandisa yedu yakabatana chinongedzo uye tora kopi yeiri risingadaviriki bhuku nhasi!
501 Kuteedzera Mapfupi
Tags: mufananidzokuteedzera kunyorakudzikisa peji kopikopi inonyengetedzakutaurirana kwekutengesa
Zvakanakisisa. Dhinda Regedzo. Ever.
Iyo Nyika yeMafoni Zvemukati Kushambadzira